Marokoroko sy voa
Ceramic Marokoroko sy Grain
Glassfibre hanampy takelaka
Quick Change bokotra
Tanatin for sisiny Wheels
Vitrified Fitotoana Vary Wheels
Fitotoana Vary sy Cylindrical ivelany Fitotoana Vary
anaty Fitotoana Vary
Centerless Fitotoana Vary
Fitotoana Vary Foko
Ball Fitotoana Vary
Gear Fitotoana Vary
Bevel Gear Fitotoana Vary
Gear Form Fitotoana Vary
kankana Fitotoana Vary
Crankshaft Fitotoana Vary
Valve Fitotoana Vary
Roll Fitotoana Vary
Tool Fitotoana Vary
Resin-nampikambana Fitotoana Vary Wheels & Hetezo-eny Wheels
Bolt-up mahitsy Fitotoana Vary kodiarana
Hypodermic fanjaitra Fitotoana Vary
Fitotoana Vary ketraka Center Wheels
Nanamafy Hetezo-eny Wheels
Large Cut-eny Wheels
Fametrahana mazava tsara fanapahana kodiarana
Marokoroko sy Lamba
Marokoroko sy Fanalana Block
mila vokatra hafa dia novokarina tamin'ny vanim-potoana samy hafa famokarana. amin'ny ankapobeny, fa faobe famokarana, ny fe-potoana dia 20-45 andro aorian'ny fandraisana ny oder. Ny fitarihana mahomby fotoana lasa, rehefa (1) no nandray ny petra-bola, ary (2) manana ny fankatoavana farany ho an'ny vokatra. Raha ny firaka fotoana tsy miasa amin'ny fetra farany, masìna ianao, mba hita ny fepetra takiana amin'ny fivarotana. Amin'ny toe-javatra rehetra, Hiezaka isika mba handraisana ny zavatra ilaina. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra isika dia afaka manao izany.
Eny, isika hampiasa foana kalitao avo fanondranana fonosana. Pallets dia ampiasaina ho an'ny ankamaroan'ny foana ny vokatra. Specialist fonosana sy ny tsy faneva dia mety hiharan'ny fonosana fepetra fanampiny fiampangana.
Adiresy: 18C Tianzhi trano, NO.63 Beijing Rd., Qingdao Free Trade Zone, Qingdao, Sina
Fa ny fanontaniana momba ny vokatra na pricelist, Masìna ianao, avelao ny mailaka ho antsika Izy ary ho mifandray ela.